Kusatya, kutendeseka, kupira mukuzvipira, rupo, kuzvidzora, uMwari, uye kuzvipira, kudzidza, kuchenesa, uye kutendeseka; kusakuvadza, chokwadi, uye rusununguko kubva kutsamwa, kurega basa, kuenzana, uye kusataura nezvezvikanganiso zvevamwe, kunzwira tsitsi, kuzvininipisa, uye unyoro; kushivirira, simba, kubwinya, uye kuchena, kungwara, chiremera, kusazvitsivira, uye rusununguko rwusingazvifungidzire-awa ndiwo mararamiro ake ane unhu hwakafanana nemwari, iwe mwanakomana waBharata.
Vol. 1 DECEMBER, 1904. Nha. 3
Pazuva makumi maviri rokutanga rokutanga raDecember, zuva, iro zuva rave rava kupfupika kubva pazuva rechimakumi maviri nemana raJune, rinotanga solstice yechando, muchiratidzo capricorn, chiratidzo chegumi chezodhiac. Mazuva matatu akatevera akatsaurirwa nevakuru kumitambo yechitendero. Pakati peusiku hwema makumi maviri nemana, iyo yekutanga kwema makumi maviri nemashanu, sezvakaita boka renyeredzi rinonzi Celectial Virgin kana Virgo, chiratidzo chechitanhatu chezodhiac, chakasimuka kumusoro, vakaimba nziyo dzokurumbidza uye panguva iyoyo akazivisa kuti Mwari weZuva akazvarwa; kuti aizova Muponesi wenyika kubva murima, kusuwa nerufu. Pakazosvika makumi maviri nemashanu kubva munaDecember, vaRoma vaitamba mutambo werufaro-mutambo wavo wezuva-mukukudza kuberekwa kwaMwari weZuva, uye mitambo yaiva padikiti yakatanga ichifara zvikuru.
Uyu Mwari weZuva, Muponesi wenyika, ndiye mwana uyo mhandara Isis anonzi iye mai mai mune izvo zvinyorwa paTemberi ye Saïs iyo yakati- "Zvibereko zvandakabereka ndiZuva." Mwaka ino (Krisimasi -tide) yaipembererwa kwete nevaRoma bedzi, asi nevakuru venguva dzose, apo Virgin-Nature-Isis-Maya-Mare-Mary akafanirwa kubereka Zuva Rokururama, Mwari weZuva, Muponesi wenyika.
Nzvimbo yekuberekwa inorondedzerwa zvakasiyana nevanhu vakasiyana. VaIjipita vakataura pamusoro pavo sehavha kana kambani, vaPersia vakati iive mhuka, maKristu anoti ndiyo idyi. Muzvinhu zvose zvakavanzika, zvakadaro, pfungwa yemumwe nomumwe yakachengeterwa, nokuti yaibva munzvimbo tsvene kana mumapako matsvene ayo Kutanga, Kwenyika Akaberekwa, Akakudzwa, akaberekwa, uye raiva basa rake kuti aende munyika kuti aparidze uye kudzidzisa uye nechiedza chechokwadi chaiva maari kuti anyaradze kusuruvara nekutambudzika; kuporesa vanorwara nevakaremara, nekuponesa vanhu kubva murima rekusaziva rufu.
Yakabatanidzwa mune zvekutengeserana, dzidzo yezvidzidzo, uye kunyanya kuda zvinhu zvechitendero nyika inoita kuti zvitendero izvi zvekare zvive pachena.
Zuva rinomiririra waKristu, wepakati, weMweya uye Usingaonekwi Sun, uyo anovapo mumuviri ndewokuuponesa kubva pakuparadzwa nekufa. Mapurogiramu ndiwo mazano anoita kuti avepo kuonekwa kwemuviri unoonekwa sezvinhu zvose zvakasikwa, uye kana muviri uyu wepanyika kana kuti zvisikwa zvose zvicharamba zvichitora Zuva reMweya zvichaita kuti kuvapo kwavo kuve kwakanzwa. Izvo zviitiko zvezuva zvakave, naizvozvo, zvinoratidza nguva uye nguva apo iyi Kristu mazano inogona kuratidzika zvakanaka pakuziva kwevanhu; uye nguva yeKrisimasi yaiva imwe yenguva dzinokosha apo maitiro matsvene akaitwa muZvino.
Hapana munhu akapa nyaya iyo pfungwa ipi zvingakundikana kuona chokwadi chokuti nyaya yekuzvarwa kwaJesu, Zoroaster, Buddha, Krishna, Horus, Hercules, kana mumwe weVaponesi vemunyika, ndiwo unhu uye nyaya inotsanangura kubva parwendo rwezuva kuburikidza nezviratidzo gumi nemaviri zvezodhiac. Sezvakaitwa nerwendo rwezuva, ndizvo zvakaitawo Muponesi wose: anoberekwa, anotambudzwa, anoparidza evhangeri yoruponeso, anowedzera simba uye simba, nyaradzo, anoporesa, enlivens uye anovhenekera nyika, arovererwa, anofa uye anovigwa , kuberekwa zvakare uye kumutswa musimba rake nesimba uye kubwinya. Kuramba ichi ndechokuti tizivise kusaziva kwedu kana kuzvitaura isu tisingaregi uye tisingatauri.
"Asi," anonyunyuta nechechikoni nekutya uye nekutya, "Ndinofanira kubvuma ichi ichi chiri chokwadi chichapedza tariro yangu uye chivimbiso chekuregererwa uye neruponeso." "Bvuma izvi," anodaro mufaro anofarira kushaya zvinhu mwoyo wemunhu waanofunga kuti ndiye muvengi wake, uye asingafungi nezvekutambudzika kwaari kupa uye tariro yaanobvisa kubva kumutendi iyeye, "bvuma izvi uye iwe unoti kuparadzwa kwemapoka ose nezvitendero. Ichaparara uye ichanyangarika sezvinozoita nechando-munda pasi pezuva rinopisa. "
Kune vose, madzinza uye nyanzvi yemitauro, tinovapindura: Zvakanyanya kunaka kukubvuma chokwadi kunyange zvazvo zvichifanira kukonzera fetishes nezvidhori zvatakavaka pakati pechiedza uye kuti tibviswa uye tisiye takashama, pane kuramba tichidavira munyika yerima yakazara nemasinga asingaonekwi. Asi chimwe chikamu chechokwadi chinotaurwa nechitendero uye nemuteveri wezvinhu zvenyama. Mumwe nomumwe, zvisinei, anonyanyisa; mumwe nomumwe anofunga kuti basa rake rakasununguka kuti agutsikane nemumwe wekanganiso yake uye kumutendeukira kune zvaanotenda. Pane ivhu rakafanana kwavari. Kana mumwe nomumwe achizviisa kune imwe nzvimbo, achawana kuti izvo zvaanoshaiwa kupedzisa kutenda kwake, mumwe wacho ane.
MuKristu haafaniri kutya kuti acharasikirwa nechitendero chake kana achigamuchira chokwadi. Munhu wezvinhu zvenyama haafaniri kutya kuti acharasikirwa neavo kana akabvuma chitendero. Hapana chinhu chakakosha kuchengeta chinogona kurasikirwa nomunhu anonyatsotsvaka chokwadi. Uye kana chokwadi chaicho chiri chikonzero chekutsvaga kwemurume wechitendero uye munhu wezvokwadi zvino chii chinogona kubvisa kune imwe?
Kana muchechi achabvuma kubwinya kwakanyanyisa kwehupenyu, vanozoparadza denga rake nemasuo aro emapuranga akakomberedza zvidhori zvaanenge aine ipapo, zvichiita kuti kuungana kwegore-kufanana kwemafungiro ake ekudengenyeka, uye kudzivisa mweya inotambudzika mugehena, moto uyo uri kupisa vavengi ivavo vasingadi kugamuchira kutenda kwake uye kutevera dzidziso dzaaidavira. Akabvisa zvisakarurama, achaona kuti mushure mekupisa kwezvidhori nemarara, pane zvakasara zviripo izvo zvisingagoni kutsanangurwa nemimhanzi chisel kana brashi.
Kana uyo anozvigadzira zvinhu achizviisa panzvimbo yeanamati wemwoyo wose, achaona kuti kune mhepo mukati maiye simba, chiedza, moto, izvo zvinoita kuti iye atore mitoro, kuita mabasa ake, kuisa mishonga yemasikirwo uye kunzwisisa mazano ayo anoshandiswa nemichina iyi, kupisa rusarura nekudada kwemvura yake inotonhora, yakaoma, uye kuchinja iwo kuva zvipfeko zvinoratidzwa uye zvapupu zvechokwadi chemweya unogara hupenyu.
Kubvuma kuti hupenyu hwaKristu ndohwendo rwezuva, hazvirevi kuti muKristu anoda kuva nyanzvi dzenyeredzi, nokuda kwechiKristu wake uye kuva mupanduki. Uye kana muKristu kana mutendi mune imwe machechi ane kodzero yekukona pamusika pamusoro pekuponeswa kwemweya, kuumba kuvimba nekutonga kwechechi yake yechitendero uye kuedza kubvisa ruponeso kune nyika ine nzara nekumanikidzira kutenga zvigadzirwa zvake.
Bvisai zvipingamupinyi! Bvisa nezvose zvinotendwa izvo zvaizovhara chiedza chenyika yose! Nyika yose inoshambidza muchiedza chezuva rimwe chete, uye vana varo vanodya zvechiedza chavo sezvavanogona. Hapana nhangemutange kana vanhu vanogona kutarisa chiedza ichi. Vese vanoziva kuti zuva rakafanana kune vose. Asi zuva rinoonekwa kuburikidza nemaziso chaiwo chete. Inoparadza muviri wenyama uye inopesana nehupenyu muzvinhu zvose zvipenyu.
Pane imwe, Invisible Sun, iyo zuva redu iri asi chiratidzo. Hapana munhu anogona kutarisa muSvinga Sun uye kuramba achifa. Nechiedza ichi ruzivo rwezvinyorwa runodhindurwa mukuziva kwemweya. Uyu ndiye Kristu unoponesa kubva mukusaziva nekufa, uyo anonyanya kugamuchira uye pakupedzisira anoziva Chiedza.
Vanhu iye zvino vanovhenekerwa zvakakwana mu nesayenzi yekuongorora nyeredzi kuziva kuti zuva rinoita mahofisi ayo kwete neipi zvipiro neminyengetero iyo inopera kana rudzi rusina ruzivo runogona kupa, asi mukuteerera mutemo we cosmic. Maererano nemutemo uyu mamwe mimwe mitumbi iri munzvimbo inoshanda pamwe. Vadzidzisi vanowanzoonekwa nguva nenguva munyika vanongova vashumiri vemutemo uyu uri kunze kwekunzwisisa kwepfungwa dzakagadzikana.
Chinhu chaicho chokuti isu takaberekerwa mumhuri yekutenda kwechiKristu haitipi kodzero yekuzviti tiri vaKristu. Kana kuti hatina munhu mumwe chete kana chero kodzero chaiyo kana ropafadzo munaKristu. Tine kodzero yekuzvitaura isu pachedu sevaKristu chete apo mweya waKristu, unova mutemo waKristu, unozvitsvakira kuburikidza nesu mupfungwa nepakutaura nekuita. Iyo inozvizivisa pachayo, haina kuziviswa. Tinoziva kuti hazvisi zvepfungwa, asi tinozviona, tinzwe uye tinozvigunzva, nokuti zvinopinda, zvinowedzera uye zvinotsigira zvinhu zvose. Icho chiri pedyo sezvachave kure. Inotsigira uye inokurudzira uye patinenge tiri mumvura yakadzika iripo kuti isimudze isu. Haikwanisi kurondedzerwa asi inoratidzika mumagariro ose nemaitiro akanaka. Iko kutenda kwevakasimba, rudo rwevanonzwira tsitsi, nekunyarara kwevakachenjera. Ndiwo mweya wekuregerera, unosimudzira mumabasa ose okusina udyire, ngoni uye kururamisira, uye mune zvisikwa zvose ndizvo zvinonzwisisika, kuwirirana Nheyo.
Sezvo zvinhu zvose zviri muchadenga zviri kushanda zvakajeka uye zvichienderana nemutemo wakajairika, saizvozvo hupenyu hwatinotungamirira huri kuumba kuguma. Apo patinotadza kuona nheyo iri pasi, zvinhu zviri pamusoro zvinoratidzika sezviri kuonekwa zvose kuti zvive mukuvhiringidzika. Asi patinodzokera kunheyo tinonzwisisa migumisiro.
Hatisi, sezvatinofunga, tichirarama munyika yezvokwadi. Tiri kurara munyika ye mumvuri. Kurara kwedu iko zvino uye kunofadza kana kushungurudzwa nedzimwe kurota kana usiku kunokonzerwa nokushandura mithunzi. Asi mweya haugoni kurara nguva dzose. Panofanira kuva nekumuka munyika yemumvuri. Pane dzimwe nguva nhume inouya, uye nekubata kwakasimba, inotikurudzira kuti tive nekumuka uye kupinda muhupenyu hwedu hwekushanda. Mweya iwoyo wakamuka unogona kusimuka uye unoita mabasa ake kana, uchinyanyisa nekupereta kwezviroto, unogona kudzokera kunyika ye mumvuri uye kuvata. Inogumburwa uye inorota. Kunyange zvakadaro kurota kwayo kuchavhiringidzika nekuyeuka kwekumuka kwayo kusvika mumvuri pachavo pachavo vachigadzirira kuimanikidza muiri yayo, uye ipapo, nekurwadziwa nekudedera ichatanga basa rayo. Basa rinodzvinyirirwa rinoitwa basa rebasa uye rinopofisa mweya kune zvidzidzo zvinodzidziswa. Basa rinoda kuitwa ndiro basa rorudo uye rinoratidzira kumuiti chokwadi chechidzidzo icho chinounza.
Munhu wose ari mutumwa, mwanakomana weInvisible Sun, Muponesi wepasi kuburikidza naye uyo Kristu chirevo chiri kupenya, kusvika pakuti iye anonzwisisa uye anoziva hupenyu huripo huri mukati. Kubva kune uyo anoziva Ichi Chinyaradzo tinogona kuva nechechokwadi yeKrisimasi chipo kana ichi ndicho chatinotsvaka. Iko Krisimasi Kunepo ndiyo inotungamirira kuhupenyu husingaperi husingagumi. Hupo huno hunouya apo isu tichiri mumumvuri-nyika. Icho chichamutsa munhu akarara kubva pakurota kwake uye kumubvumira kusave nekutya kwemumvuri wakapoteredza. Kuziva mumvuri kuti ave mumvuri iye haatyi pavanenge vachiita sevanenge vadzidza uye vachimukurira.